ओपेकसँग कतारको ‘सम्बन्ध विच्छेद’ र साउदी अरब, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ओपेकसँग कतारको ‘सम्बन्ध विच्छेद’ र साउदी अरब
बीबीसी। कतार अब आपेकमा रहेन। तेल उत्पादन देशहरुको यो संगठनमा कतार ५७ वर्षदेखि आवद्ध थियो। ओपेक देशले जति तेल उत्पादन गर्छन् त्यसमा दुई प्रतिशत कतारको थियो।
तर खाडीको यो सानो देशको ओपेक जस्तो शक्तिशाली संगठनबाट बाहिरिने निर्णयलाई मध्यपूर्वको राजनीतिमा भूकम्पको झड्का जस्तै गरी हेरिएको छ। सन् १९६० मा गठनपछि कतार ओपेकबाट बाहिरिने पहिलो मध्य पूर्व मुलक भएको छ। यद्यपी कतारका उर्जामत्री साद अल–काबीले मध्य पूर्वको राजनीतिक गतिविधिका कारण आफ्नो मुलुक ओपेकबाट बाहिदिएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।
कतार ठूलो खेलाडी
कतारले आफ्नो प्राथमिकता तेलमा नभएर ग्यासमा भएको दाबी गर्दै आएको छ। दोहामा साद अल–काबीले भने, ‘कतारले जनवरी २०१९ बाट ओपेकबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आपेकलाई जानकारी गराइएको छ।’ अब प्रश्न के उठ्छ भने कतारले तेलको ठाउँमा ग्यासलाई किन प्राथमिकतामा राख्यो?
उर्जा मामिलाका जानकार रिचर्ड म्यालिसन भन्छन्, ‘तेल उत्पादनको हिसावले हेर्ने होभने कतार सानो मुलुक हो। तर ग्यासको बजारमा कतार ठूलो खेलाडी हो। विशेषगरी एलएनजी मार्केटमा। यहाँ कतारको दबदबा नै छ। एसियाको बजारामा जुन ग्रोथ रेट छ, त्यसमा भागेदारी बढाउनकालागि यसले महत्व राख्छ।’
साद अल–काबीले पनि दोहामा यही कुरा भनेका थिए। ‘तेल बजारमा हाम्रो लागि धेरै संभावना छैन। हामीलाई वास्तविक यथार्थता थाहा छ। तर ग्यासको बजारमा हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौं,’ उनले भने।
रिजर्ड म्यालिसन भन्छन्–पारम्परिक रुपमा जापान र कोरिया कतारका ग्राहक हुन्। चीन र भारत जस्ता तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिरहेका मुलुक कतारकालागि राम्रो मौका हो। कतारले युरोपमा पनि नियमिति रुपमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ।’ यो विषयले कतारको एजण्डामा ग्यास माथि छ। तर ओपके छोड्दा के फाइदा हुन्छ?
यो प्रश्नको जवाफमा रिचर्ड भन्छन्– कतारको ओपेक छोड्ने निर्णयले कस्तो असर पर्छ भन्ने निश्चित भएको छैन। ओपेकमा तेल उत्पादनलाई बढाउन वा घटाउन सक्ने प्रावधान छ। तर कतारले ओपेक छोड्ने निर्णयको पछि यही मात्र कारण हो जस्तो देखिँदैन।’ विशेषज्ञहरुका अनुसार कतारको यो निर्णय साउदी अरबको अगुवाइमा उसका छिमेकी देशप्रति गरिएको बहिष्कारको जवाफमा उठाएको कदम हो।
आेपेकमा साउदी अरबको दबदबा छ र गत वर्ष साउदीले कतारमाथि मध्य पूर्वमा अस्थिरता र इरानमा रहेका चरमपन्थी गुटलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, इजिप्ट, यमन, लिबियाले साउदी अरबको साथ दिएका थिए र कतारमाथि एक प्रकारको आर्थिक नाकाबन्दी गरिएको थियो।
आेपेकसँग कतारको ‘सम्बन्ध विच्छेद’ साउदी अरबको अगुवाई भएको यो संगठनकालागि ठूलो झड्का हो। ओपेकको स्थापना सन् १९६० मा बगदादमा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र भेनेजुएलाले गरेका हुन्। त्यो बेला यसको उद्देश्य अमेरिकी र युरोपेली तेल कम्पनीको शक्तिबाट तेल उत्पादक देशको हक हितमा काम गर्ने थियो।
ओपेक गठनको सुझाव भेनेजुएलाले दिएको थियो। त्यसपछि १९६० र २०१८ को बीचमा पाँच सदस्य देशसँगै दश अन्य देश पनि सहभागी भए। यसमा सात मध्य पूर्वका देश छन् भने ६ वटा अफ्रिका र दुई दक्षिण अमेरिकी देश छन्।